मुख्यमन्त्री भन्छन् : रोगले भन्दा भोकले मरिने डर भो - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Editor-Picks मुख्यमन्त्री भन्छन् : रोगले भन्दा भोकले मरिने डर भो
पोखरा । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईँमा एक दिन पनि आफूहरु ननिँदाएर अविरल काम गरेको बताएका छन् । उनले प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भने खाली यो सरकारले केही गरेन भनेर विरोध मात्र गर्ने ?
गण्डकी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन सन्दर्भमा १५ औं बैठकमा बिहीबार नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो स्पष्ट पारेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शनिबारको दिनमा पनि घरमा बसेको छैन, रातदिन नभनी काम गरिरहेको छु भन्दै राष्ट्रिय समस्याका कारण आफूहरुले कामको परिणाम पाउन नसकेको गुनासो गरे । कोरोनासँगै लामो समयको लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन प्रदेश सरकारले बैशाख पहिलो सातादेखि नै विकास निर्माणको काम थालनी गरेको सदनमा जानकारी दिए । यद्यपि प्रदेशको सो अभियानमा बागमती र प्रदेश ५ ले अवरोध गरेको आरोप लगाए । ‘हाम्रोमा धेरै हरियो गाउँहरु छन् । त्यस्ता गाउँ किन लकडाउन गरिराख्ने? बाहिरबाट आएका मानिसलाई लक गर्छौ, कुटो कोदालो लक गर्न हुन्न भन्यौं, त्यसैअनुरुप विकास निर्माणसँगै कृषि उत्पादनका कार्यक्रम अघि बढायौं तर गण्डकीले गरेको यो कुरामा नेपाल सरकारसहित बागमती प्रदेश र प्रदेश ५ बेखबर हुँदा चाहेजस्तो ढुवानी हुन सकेन, अबरोध भयो’ भने । उनले प्रदेशभित्रकै कच्चापदार्थको भने आफूहरुले यतिबेला व्यवस्थापन गरेको बताए ।
कोरोनासँगै लामो समयको लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन प्रदेश सरकारले बैशाख पहिलो सातादेखि नै विकास निर्माणको काम थालनी गरेको सदनमा जानकारी दिए
उनले कोरोना रोग जित्न लकडाउनले सकिएला तर भोकलाई जित्न नसकिने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सधैँ लकडाउन गरेर रोग जित्न त सकिएला तर भोक जित्न सकिँदैन । हाम्रो पुँजी विकासलाई बचाउन कठिन छ ।’
गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरामा प्रादेशिक प्रयोगशालामा हाल २ पीसीआर मेसिन संचालित रहेकोमा अब थपेर ३ पु¥याइने बताए । उनले नयाँ खरिदपछि दैनिक ७ सय नमुना परीक्षण गर्न सकिने बताए ।
कोभिडको प्रभावपछि पोखरामा प्रदेश प्रयोगशाला स्थापना भएको भन्दै उनले साउनसम्म मुलुकबाहिरबाट ३० हजार गण्डकी प्रदेशमा आउने अनुमान रहेको बताए । उनले भने, ‘ती सबैको पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ । महिनामा १० हजारको टेस्ट गर्न सक्नुपर्छ ।’
अर्को प्रसंगमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज नगरी यसको मोडालिटी भने फेर्न सकिने बताएका छन् । पहिले आफू नै सो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ भनी लागेकोमा सांसदहरु नै सबैतिर घुमेर आइसकेपछि सो कार्यक्रम मागेकोले व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे । उनले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँदै सो कार्यक्रमको कार्यविधि फेरबदल गरी निरन्तरता भने दिइरहने बताए । उनले फजुल खर्च रोकी कम्तीमा ६० प्रतिशतसम्म कृषि योजनामा पर्ने गरी सो कार्यक्रमलाई अघि बढाइने बताए । प्रदेशमा समानुपातिक सांसदले प्रत्यक्षजस्तो समान हैशियत नभएको गुनासोले केही क्षेत्रमा बाँडफाँडमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । चालु आवमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालित भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले जेठ १८ मा प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि ३ दिनसम्म सांसदले त्यसबारे छलफल गरेका थिए । सो क्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्ष दलका सांसद एवं केही समानुपातिक सांसदले उठाएका थिए ।